"Gee" kwicala leBase Camp Bigfork Lodge
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguSamantha
Indawo yokulala yahlulwe yangamacala amabini ahlukeneyo nangona kunjalo xa ubhukisha, sivala elinye icala ngexesha lokuhlala kwethu. Oku kusivumela ukuba singajiki indawo yonke kodwa usayifumana yonke kuwe.
"I-Gee Side" iya kuba yeyakho kunye nendawo yasekhitshini. "I-Haw Side" iya kutshixwa kwaye ingahlali kwindawo yakho yokuhlala.
Esi sithuba sisebenza njengendawo egqibeleleyo yokubaleka isibini ukuze sihlangane kwakhona phakathi kohambo.
Indawo yokulala yahlulwe yangamacala amabini ahlukeneyo kwaye ngenxa yokuba sikwabonelela ngokhenketho olunezinja sicinge ukuba kufanelekile ukubathiya amagama sisebenzisa imiyalelo yesileyi yezinja: "Gee" (ekunene) kunye no "Haw" (ekhohlo).
“Gee” ligumbi labucala elinebhafu yabucala, eBase Camps Lodge. Inokungena kwayo, umnyango okhuselekileyo kunye neveranda egqunyiweyo yabucala.
Ikhitshi kunye nendawo yokuqokelela iya kuba yeyakho onokuthi uyisebenzise ngexesha lokuhlala kwakho.
Isiseko senkampu esigqibeleleyo sokuba uphumle intloko yakho phakathi kwama-adventures. Kufuphi nemilambo, amachibi, kunye neendlela. Le ndawo ikunika lonke ukhuseleko lwaseMontana olunqwenelayo ngomgama omfutshane kuphela (iikhilomitha ezi-3) kwizinto eziluncedo zeBigfork.
Indawo yokulala ikwindawo enye yeehektare ezisi-8 njengekhaya lethu kunye nendlwana enezinja. Sibekwe bucala ngaphandle kwembono kodwa sinokufumaneka ukuba kukho iimfuno. Siyakonwabela ukusingatha kunye nokwabelana ngepropathi yethu nabanye kodwa siya kwenza konke okusemandleni ethu ukuba sicingele nokuba bucala kwakho.
Indawo yokulala ikwindawo enye yeehektare ezisi-8 njengekhaya lethu kunye nendlwana enezinja. Sibekwe bucala ngaphandle kwembono kodwa sinokufumaneka ukuba kukho iimfuno. Siyakonwa…